Ị nọ ebe a : >lọ>Product>GRG Acoustic Board
Model Number: Ogwe acoustic GRC
GRG na-agbaso ụkpụrụ nke ime ka ọ dị mkpụmkpụ ma ọ bụghị oké. Bionic ọnụego + ụda nnyefe + ụda nnabata ụda = 1, na-enweta nsonaazụ akparamaagwa nke belata ụda ikuku na-agagharị.
1. Enweghị nrụrụ
Dika GRG isi ihe onwunwe enweghi mmetụta corrosive na akwara iko, yana okpomoku okpomoku na-erughi 0.01%, enwere ike ikwusi ngwaahịa a ike ịrụ ọrụ kwụ ọtọ, ịdịte aka, enweghị mgbawa, enweghị nbibi na ogologo ọrụ.
2. Irọ dị mfe
Oke ọkpụrụkpụ nke akụkụ dị larịị nke ngwaahịa GRG bụ 3.2 ruo 8.8MM (enwere ike ito ya nke ukwuu maka ihe pụrụ iche), na kilogram n’arọ ọ bụla bụ naanị 4.9 ruo 9.8KG, nke nwere ike belata ibu nke nnukwu ụlọ na ibu. nke mmiri mejupụtara.
3. Ike elu
Nyocha na-egosi na nsogbu mgbaji nke ngwaahịa GRG karịrị 1200N, nke ji okpukpu 10 dị elu karịa ibu mgbaze nke 118N nke JC / T799-1998 (1996) bọọlụ eji achọ mma.
4. Iku ume iku ume
Ngwakọta GRG bụ efere nwere micropores dị ukwuu. Na gburugburu ebe obibi, aru ahụ nwere ike ịmị ma ọ bụ hapụ mmiri. Mgbe ọnọdụ ime ụlọ dị elu ma dị udu ala, bọọdụ ahụ na-eji nwayọ wepụta mmiri dị na micropores; Mgbe okpomọkụ dị n’ime ụlọ dị ala ma dị udè dị elu, ọ ga-enweta mmiri n’ikuku. Ntọhapụ a na iku ume na-etolite “iku ume”. Mgbanwe cyclic nke mmiri mmiri na iwepụta mmiri na-ekere òkè n'ịhazigharị ọnọdụ ikuku n'ime ụlọ yana ịmepụta microclimate dị mma maka gburugburu ebe ọrụ na ebe obibi.
5. Mgbochi ọkụ
Ihe GRG bụ ihe eji emechi ọkụ. Mgbe ọkụ mere, ihe GRG nwere ike ọ bụghị naanị ire ọkụ, kamakwa hapụ 15% ka 20% nke mmiri ya, nke nwere ike belata oke okpomoku ma belata ọkụ.
6. Nchedo gburugburu ebe obibi
Ihe GRG enweghị isi, na oke nke radionuclide kwekọrọ n’usoro ọkọlọtọ Klas A chọrọ ya na GB6566-2001. Ma ihe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi.
7. Mmetụta arụmọrụ ọma
Nsonaazụ nnwale gosiri na ihe GRG nwere ọkpụrụkpụ nke 4MM na-abanye 500 Hz 23 d 100 Hz 27 db. Igwe ikuku ga-eme ka ikuku kpachara anya bụ 1.75, nke na-emezu ihe ndị ọkachamara nyocha ahụ. Site n'ichepụta ezigbo ihe nke ọma, enwere ike ịhazi ezigbo nnabata ụda iji wee nweta ụda mkpuchi na ịnabata ụda.
8. Nhazi usoro dị mkpirikpi
Oge iwere nke ngwaahịa GRG na-ewe naanị minit 30 ma oge ihicha ahụ na-ewe naanị awa 4. Ya mere, oge owuwu ihe a ga - egbutu oke.
9. Ewu wuoro gi
Enwere ike ịkpụgharị GRG na akpaghị aka dịka atụmatụ onye nrụpụta, enwere ike ịmepụta ma kesaa ya na nnukwu nkanka. Nrụ ọrụ na saịtị dị mma, nrụnye na-eme ngwa ngwa ma na-agbanwe agbanwe, enwere ike ịme nnukwu ọgbakọ enweghị mkpụmkpụ iji mepụta ọdịdị zuru oke. Karịsịa maka oghere, arc, akuku na isi ihe ndị ọzọ mara mma, nwere ike ijide n'aka na ọ nweghị njehie.
10. Ihe dị n’elu ahụ adịghị mma.
Nchacha ahụ ruru ihe karịrị 85%, a ga-ejikọkwa ya nke ọma na ọtụtụ ihe mkpuchi na ihe ịchọ mma dị elu iji rụpụta ihe ịchọ mma kachasị mma.